Amathiphu ama-5 Wokubhekana Nabezindaba Njengomthombo Wezazi | Martech Zone
Izintatheli ze-TV nezokuphrinta zixoxisana nochwepheshe ngazo zonke izinhlobo zezihloko, kusukela ekwakhiweni kwehhovisi lasekhaya ngezindlela ezinhle kakhulu zokongela umhlalaphansi. Njengongoti emkhakheni wakho, ungabizwa ukuthi ubambe iqhaza esigabeni sokusakaza noma ku-athikili yokuphrinta, engaba yindlela enhle yokwakha umkhiqizo wakho futhi wabelane ngomlayezo omuhle ngenkampani yakho. Nawa amathiphu amahlanu wokuqinisekisa isipiliyoni semidiya esihle, esikhiqizayo.
Lapho Abezindaba Babiza, Phendula
Uma unethuba lokuxoxwa ne-TV noma okuphrintiwe, yeka noma yini oyenzayo. Njengomphathi, enye yezindima zakho ezibaluleke kakhulu ukwenza isiqiniseko sokuthi inkampani yakho ithola abezindaba abahle. Amalungu abezindaba angabiza kalula omunye wabaqhudelani bakho, ngakho-ke lapho bekhetha ukukushayela, sebenzisa lelo thuba ukuthola igama lenkampani yakho nomyalezo lapho.
Phendula ngesikhathi esifanele futhi uzenze utholakale. Uma ubambisana futhi ufinyeleleka, kungaba ukuqala kobudlelwano obude futhi obuzuzisayo. Nikeza intatheli inombolo yakho yocingo bese umtshela ukuthi angakuthinta noma nini.
Hlela Lokho Ofuna Ukukusho Futhi Uzokusho Kanjani
Iba nohlelo oluphelele lwalokho ofuna ukukuthola kunoma iyiphi ingxoxo nabezindaba. Intatheli ine-ajenda yayo: Ufuna ukunikeza abalaleli bakhe indatshana ethokozisayo, efundisayo. Kepha futhi une-ajenda: ukuxhumana nomyalezo omuhle ngenkampani yakho. Ufuna ukuphendula imibuzo yentatheli, kepha wazi ukuthi ungazungeza kanjani.
Ithi intatheli yenza ingxenye ye-TV enhlalakahleni yenja, ngamacebo awusizo wokuthi abantu bangaqinisekisa kanjani ukuthi inja yabo iphilile. Angase axoxe nomfuyi wezinja ukuthola amathiphu. Umfuyi angabelana ngobuchwepheshe bakhe bokugcina izinja ziphilile, kanti futhi ukhuluma nokuthi ube ngumfuyi ophumelelayo iminyaka engama-25 nokuthi ubeka uthando oluningi nomzamo omkhulu ekukhiqizeni imidlwane enempilo, ejabule.
Yazi Okwaziyo, Nalokho Ongakwazi
Njenge-CEO yenkampani yakho, kufanele wenze izingxoxo eziningi zabezindaba. Usiqonda kangcono isithombe senkampani yakho ukwedlula noma ngubani, futhi uwubuso benhlangano. Kepha kwesinye isikhathi kunabantu ngaphakathi kwenhlangano yakho abanolwazi olukhethekile ngesihloko esithile. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngenkathi ungaba uchwepheshe ezintweni eziningi, awuyena uchwepheshe kukho konke.
Ithi inkampani yakho imaketha izengezo ezinomsoco namavithamini. Ungahle wazi ukuthi yimiphi imikhiqizo yakho ehlonishwa kakhulu futhi ethengisa kakhulu, kepha ungahle ungayazi isayensi ngqo ngemuva kwayo yonke imikhiqizo. Ngakho-ke uma inhlolokhono imayelana nokuthi isengezo esithile sisebenza kanjani, kungaba ngcono ukuthepha isazi sesayensi esisebenza kulayini womkhiqizo ukwenza inhlolokhono. Khomba abantu abehlukene abanezindawo ezahlukahlukene zobungcweti enhlanganweni yakho, bese ubalungiselela kusengaphambili ukuthi bazokhuluma nabezindaba.
Encwadini ehlobene, uma intatheli ikubuza umbuzo ongayazi impendulo yawo, ungacabanga ukuthi yihlazo lokugcina. Kepha ungakhathazeki: Akukho lutho olungalungile ngokutshela intatheli ukuthi:
Lowo ngumbuzo omuhle, futhi ngifuna ukwenza ucwaningo ukuze ngithole impendulo enhle. Ngingabuyela kuwe kamuva namuhla?
Futhi ungaqageli impendulo. Futhi lapho ubuyela entathelini, qiniseka ukubeka impendulo ngamazwi akho. Musa, ngokwesibonelo, ukusika nokunamathisela amagama avela ku-athikili yephephandaba noma kuwebhusayithi bese uyithumela entathelini nge-imeyili. Noma imiphi imibuzo ebuzwayo kufanele iphendulwe ngolwazi lwakho - noma ngabe kufanele wenze ucwaningo ukuze uthole lolo lwazi.
Njalo phatha izintatheli ngenhlonipho. Vuma igama lentatheli, noma ngabe kungxoxo ye-TV, yocingo noma yewebhu.
Yiba nenhlonipho futhi ube nombono oqondile. Yisho izinto ezifana nokuthi "Umbuzo omuhle lowo" nokuthi "Ngiyabonga ngokungifaka."
Noma ucabanga ukuthi umbuzo uyahlekisa, ungenzi intatheli izizwe iyisiwula. Ungasho ukuthi, “Kungani ubuze kimi lokho?” Awazi ukuthi intatheli izokwazi kanjani ukuthatha izimpendulo zakho futhi ifake imininingwane endabeni.
Ungaphikisani nentatheli, ikakhulukazi uma usesemoyeni. Hlala wazi ukuthi uma unegalelo futhi ulaka, indaba izotholakala ngethoni engeyona.
Futhi uma ukhulumela phansi intatheli, izobheka kwenye indawo ngokuzayo lapho idinga khona uchwepheshe emkhakheni wakho.
Uma uxoxwa nekhamera, cabanga ngokubukeka kwakho. Madoda, uma ugqoke isudi, qhafaza ibhantshi; kubukeka kuchwepheshe ngokwengeziwe. Esikhundleni sesudi, ihembe legalufu elinophawu lwenkampani yakho kuyindlela enhle kakhulu. Mamatheka lapho ukhuluma ungasheleli.
Vele, izingxoxo eziningi namuhla zenziwa nge-Zoom noma ubuchwepheshe obufanayo. Qiniseka ukuthi ugqoka kahle (okungenani kusuka okhalweni kuya phezulu), futhi unake ukukhanyisa nemvelaphi yakho. Esikhundleni sokungahleleki okuhlelekile, okwasemuva okuhle, okucocekile - mhlawumbe ne logo yenkampani yakho evezwe ngokugqamile - kuzosiza ukukukhombisa wena nenkampani yakho ngokukhanya okungcono.
Uma unemibuzo mayelana nokubhekana nabezindaba, usazise. Njengenkampani yokuthengisa ngokugcwele kanye nobudlelwano bomphakathi Imisebenzi Yezokumaketha inikeza ukuqeqeshwa kwabezindaba kanye nezinye izinsiza eziningi.
Tags: umthombo onguchwephesheingxoxo nabezindabaizingxoxo onlineCindezelaingxoxo yezobudlelwano nomphakathizoom